တစ်ရက်တာအတွက် မနက်မှာပြုလုုပ်တဲ. ၁၀ မိနစ်ဟာ အသက်ပါ။ | YEC
Motivated ဖြစ်ချင်ရင် စာအုုပ်ဖတ်နေရုုံနဲ.မရပါဘူး။ သင်တန်းတက်ရင် တစ်ပတ် နှစ်ပတ်သာခံပါတယ်။ Jim Rohn ပြောသလိုု Motivation ဆိုုတာရေချိုးသလိုု နေ.တိုုင်းလုုပ်ဆောင်ပေးရပါတယ်။
နေ.စဉ် Motivated ဖြစ်အောင် ဘာတွေလုုပ်မလည်း?
မနက်ထထချင်း မိမိကိုုယ်စိတ်နှစ်ပါး peak အထွတ်အထိပ်အဆင်.ရောက်အောင် priming လုုပ်ဖိုု.လိုုပါတယ်။ အားကစားသမားတွေ လေ.ကျင်.ခန်းမလုုပ်ခင် warm up သွေးပူလေ.ကျင်.ခန်းလုုပ်သလိုုဘဲ တစ်ရက်တာမစခင်မှာ exercise လုုပ်ဖိုု.လိုုပါတယ်။ exercise ဆိုုတဲ.နေရာမှာ သာမာန် လေ.ကျင်.ခန်းပါသလိုု စိတ်လေ.ကျင်.ခန်းလည်းပါပါတယ်။ စိတ်လေ.ကျင်.ခန်းလုုပ်ရာမှာ တစ်ရက်တာရဲ.အကောင်းဆုံုးပုံုရိပ်ကိုု visualization လုုပ်တာပါသလိုု တစ်လတာ ရည်မှန်းချက်ကိုု visualization စိတ်ကူးပုံုဖော်တာပါဝင်ပါတယ်။
Priming ပြုလုုပ်နည်းများထဲမှာ3ချက်ကိုု ဖော်ပြလိုုက်ပါတယ်။
1. Be your goal
ကုုိယ်ဖြစ်ချင်တဲ. ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုုင်ရဲ. goal ဖြစ်ပါ။ အရာရာပြောင်းလညး်ချင်ရင် မိမိကိုုယ်ကိုုမြင်တဲ. အမြင် perception မပြောင်းဘဲ ပြောင်းလည်းလိုု.မရပါဘူး။ ဒါကြောင်.ပထမဆုံုးအနေနဲ. မိမိရဲ. self-image or identity ကိုု အရင်တည်ဆောက်ပြီးမြင်ယောင်ကြည်.နိုုင်ပါတယ်။ နေ.စဉ်ပုံုဖော်ပါ။
ဖြစ်ချင်တဲ.အရာတစ်ခုုကိုု ထပ်ခါထပ်ခါ ရွတ်ဆိုုခြင်း။ ဥပမာ နေ.စဉ်နေ.တိုုင်း ကိစ္စအဘက်ဘက်မှာ ပိုုပိုုပြီး ကောင်းသထက်ကောင်းလာနေပြီ။ Everyday in every way I am getting better and better.
ကုုိယ်ဖြစ်ချင်တဲ.အရာတွေ ရေးထားတာကိုု ဂါထာလိုု body movement ဘာ ပါဝင်ပြီး ရွတ်ဆိုုတဲ.နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ All I need is within me now. I am confident. I can do it. Yes. ငါလိုုချင်တာတွေအားလုံုးပိုုင်ဆုုိင်ပြီးပြီ။ ငါ.မှာစွမး်အားတွေရှိတယ်။ ငါအကောင်းဆုံုးကြိုးစားမယ်။ အောင်ကိုုအောင်မြင်ရမယ်။ YESSSSS!
Sep9ရက်နဲ. 10 ရက်မှာ DYD (Design Your Destiny) Program ကို မန္တလေးမှာစတင်ပါမည်။2days full-day program ဖြစ်တဲ့ DYD ဆိုုတာကတော. Personal Development Techniques တွေထဲက ကျွန်တော်တိုု.နဲ.အကိုုက်ဆုံုး နည်းလမ်းတွေ handpicked လုုပ်ပြီး designed လုုပ်ထားတဲ. program ဖြစ်ပါတယ်။
Phyo Paing @ Derek
လက်ရှိမှာ Marketing နှင်. Personal Development အပိုုင်းကိုု Training ပေးနေပါတယ်။